रेबिज दिवसको अवसरमा सडक कुकुरलाई भ्याक्सिन
September 28, 2020 gautam buddha sandesh	0 Comments
बुटवल, १२ असोज ।
विश्व रेबिज दिवसको अवसरमा सोमबार बुटवलका सडक कुकुरहरुलाई भ्याक्सिन लगाइएको छ । बुटवलका ४ जना युवाहरुको अगुवाइमा दिवसमा भ्याक्सिनेसन कार्यक्रम गरिएको हो ।
मानिसहरुलाई छाडा कुकुरहरुबाट रेबिजको सम्भावना हुने भएकाले अभियानका रुपमा अघि बढाईएको युवाहरु बताउँछन । अल केयर नेपालमा आवद्ध युवाहरु आकाश धिमाल, अस्बिन के.सी., रमेश रिजाल र दिपक रिजालले लकडाउनसंगै बुटवलमा छाडा कुकुरहरुलाई खाना खुवाउने र संरक्षणको काम अघि बढाएका हुन ।
भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको भ्याक्सिन सहयोग तथा पक्लिहवा कृषि क्याम्पसका भेटनरी सर्जन डा. गंगा यादव, डा. सुदिक्षा पण्डित, भेटनरियन विद्यार्थीहरु केशव लम्साल र सन्दिप पौडेलले प्राविधिक सहयोग गरेका छन । रिफ्रेस क्याफे र लाईन एण्ड लेमन लन्च बारले समेत सहयोग गरेको छ ।
कार्यक्रम एक हप्तासम्म सञ्चालन हुने अल केयर नेपालका दिपक रिजालले बताए । बुटवलका मुख्य चोकहरु ट्राफिक चोक, सुख्खानगर, योगीकुटी, डिगरनगर, देवीनगर लगायतका क्षेत्रमा सिभिर राखिने उनले बताए । सन २०३० सम्म जिरो रेबिज लक्ष्य अनुसार नेपाल सरकारका योजनाहरु नलागेको उनले दुःखेसो गरे । रेबिज लागेको कुकुरको टोकाइबाट धेरै मानिसको मृत्यु हुने गरेको भए पनि यसतर्फ स्थानीय सरकारको समेत चासो जान सकेको छैन । गएको आर्थिक वर्ष रुपन्देहीमा ७ हजार ८ सय जनालाई कुकुरले टोकेको थियो भने पछिल्लो दुई महिना मात्र १ हजार २ सय जनालाई कुकुरले टोकेको छ ।
← कृषि अनुसन्धान परिषदमा भैरहवाका भण्डारी नियुक्त
‘एसिड छ्याप्नेहरु २० वर्ष जेल बस्नुपर्छ, एक सेकेण्ड पनि‍ छुट हुँदैन’ →
सिलाई कटाई तथा व्युटीपार्लर तालिम
June 13, 2018 gautam buddha sandesh	0
कृषि क्याम्पसमा हप्ता दिन देखि आन्दोलन
August 7, 2018 gautam buddha sandesh	0
बुद्ध जयन्तीको तयारी शुरु
May 1, 2019 gautam buddha sandesh	0